नीजि विद्यालयसंगै प्रतिस्पर्धा गर्न सफल प्रकास मा.वि. - Saptakoshionline
नीजि विद्यालयसंगै प्रतिस्पर्धा गर्न सफल प्रकास मा.वि.
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २२, २०७५ समय: २:०४:४६
मदन अधिकारी / प्रकाशपुर हाम्रो विगत फर्केर हेर्ने हो भने निकै कष्टपूर्ण लाग्दछ । १०–१२ वर्ष अघिका कुरा त नौला हुन्छन् भने २०२०–२०२१ सालताका शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो ? २०२१ साल चैत्र २१ गते शनिवार स्थावना भएको प्रकास मा.वि.को तत्कालिन प्ररम्भिक कक्षाका पढाइहरु रुखको छहारीमा हुने गर्दथे । त्यसताका मानिसहरु शिक्षालाई हालको जस्तो अनिवार्य नमान्य प्रवृत्ती, पढाइको महत्व नुझेको समुदायका कारण विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिती हुदैनथियो । ८– १० जना सुजवुज भएकाहरुले आफ्ना नानिहरुलाई विद्यालय पठाउने गर्दर्थे । केही समय यसरी कक्षा संचालन गरिएपनी सधै रुखको फेदमा शिक्षा दिन सम्भव थिएन । त्यसैले विकल्पको खोजी गर्न स्थानिय वुद्धिजिविहरु तल्लीन भए । चुडामणि सुवेदी, कुबेर प्रसाद घिमिरे, श्यामभाई लुइटेल, छबिलाल पौडेल लगायतको प्रयासमा विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार प्राप्त गर्न सफल भयो । सामान्य टाटीको घेरावेरा र लिपपोत गरि तयार गरिएको भौतिक पूर्वाधार भएपनी सो समयका लागि प्रयाप्त थियो । सामान्य पूर्वाधारको विकास संगै विद्यालयले आफ्नो पठनपाठनलाई निरन्तरता दिदै गयो ।
२०३० सालमा प्राथमिक तहवाट स्तरोन्नती गरि निम्न माध्यामिक तहको पठनपाठन सुरु गरेको विद्यालयलाई जगत वहादुर कार्की, लोक वहादुर कोइराला र सुन्दरलाल चौधरीको अतुलनिय सहयोग रहेको थियो । नि.मा.वि. सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयलाई माध्यामिक तह सञ्चालन गर्न भने निकै धौ धौ पर्न गयो । तर पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ २०३५ सालमा स्थानिय समाज सेवी छविलाल पौडेलले विद्यालयमा माध्यामिक तह सञ्चालन गर्न आफ्नो घर जग्गा धितो राख्न समेत पछि परेनन् । पौडेलको अविश्मरणीत तथा अतुलनिय योगदानकै कारण विद्यालयमा माध्यामिक तह सञ्चालन गर्न सफल भयो । निरन्तर आइपरेका विभिन्न समस्याहरुलाई पछि पार्दै विद्यालयको स्तरोन्नती र तहवृद्धिमा लागि परेका शिक्ष, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समय वित्दै जाँदा प्रकाश मा.वि.मा दश जोड २ का कक्षा सञ्चालनको समेत आवश्यकता महशुष गर्यो । सोही अनुरुप विद्यालयमा पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नरेन्द्र वस्नेतको नेतृत्वमा २०६५ साल श्रावण महिना देखी प्रकास मा.वि.मा दश जोड २ का कक्षा समेत सञ्चालन हुन थाल्यो । दश जोड दुई कक्षा सञ्चालन गर्दा ताका पनि विद्यालयलाई माध्यामिक तह सञ्चालन गर्न झैँ समस्या नपरेको भने हैन । फरक यति थियो समस्याको प्रकृती फरक थियो । तत्कालिन नेतृत्वकर्ता नरेन्द्र वस्नेतले नेकपा माओवादीका समानुपातिक सांसदहरुबाट कक्षा संचालनका लागि श्रोत व्यवस्थापन गरे । तत्कालिन झापाका सांसद धर्मशिला चापागाईं तथा सुनसरीका पुजा खनालको सहयोगमा श्रोत व्यवस्थापन गरेको वस्नेत वताउँछन् । श्रोत व्यवस्थापन भएपनी स्थानियहरु दश जोड २ का कक्षा सञ्चालन गर्ने पक्षमा थिएनन् । वर्षेनी प्रकासपुरका सयौँ विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागी ठुला सहर इटहरी, धरानमा अध्ययन गर्न बाध्य भएपनी स्थानियहरुलाई सो तह सञ्चालन गर्न सकिदैन भन्ने ठुलो डर थियो । त्यसैले उनिहरु आवश्यक नभएको वनावटी उत्तर दिने वस्नेत वताउँछन् । तथापी तत्कालिन प्रधानाध्यावक रोहित घिमिरेको राम्रो सहयोग मिलेपछी प्रकाश मा.वि.मा दश जोड २ का कक्षाहरु सञ्चालन हुन सफल भयो । दश जोड दुइका सह संयोजक चन्द्र प्रसाद सिग्देल कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको वताउँछन् विद्यालयले दश जोड २ कक्षा अन्तरगर्त शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसो त विद्यालयका कक्षाहरु कुनै नीजि विद्यालयका कक्षा भन्दा कम छैनन् ।
विद्यालयले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ । परिचय पत्र र पोशाक विना विद्यार्थीहरु विद्यालयमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । परिक्षामा परिक्षण गरिएका कपीहरु विद्यालयले विद्यार्थीको घरघरमा पठाउने गरेको छ । यसो गर्दा शिक्षामा अभिभावकको सोझो सहभागीता रहने र आफ्नो विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था प्रती अभिभावक जानकार र सचेत रहने सह संयोजक सिग्देल वताउँछन् । यता विद्यालय व्यवस्थावन समितिका अध्यक्ष दामोदर काफ्ले विद्यालयको छिन छिनलाई अझ प्रभावकारी वनाउने वताउँछन् । हाल यताकदा विद्यालय हातामा खैनी, चुरोट प्रयोग गर्ने विद्यार्थी रहेको वताउदै उनी गेटमै वसेर त्यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने वताउँछन् । अर्को तर्फ विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई नियमित वनाउने, जसका लागि शिक्षकलाई इलेक्ट्रिक हाजिरीको व्यवस्था गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनी वताउँछन् । यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक चुडामणी खनाल विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएको त्यती लामो समय भएको छैन । तर उनले विद्यालय सुधारका लागि दर्जनौ कामहरु गरेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि उनले टेक्नोलोजीबाट शिक्षण सिकाइको सुरुवात गरेका छन् । हाल विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव छ भने प्रोजेक्टरवाट शिक्षण सिकाइ हुने गर्दछ । त्यसो त खनालकै पालामा विद्यार्थी र शिक्षकलाई अनिवार्य पोषाक तथा परिचय पत्रको व्यवस्था भयो । समयमा शिक्षक नआउने परिपाटीको स्थापना हुन पुग्यो । खनालले हाल विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका तथा उपयोग हुन नसकेका जग्गाहरुको खोजी कार्यलाई समेत तिव्र वनाएका छन् । केही वर्षमै विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु हकभोगमा ल्याउने खनाल वताउँछन् । त्यसो त विद्यालयको खेल मैदानलाई पूर्वकै उत्कृष्ट खेलमैदान वनाउने उनको सपना रहेको छ । फाँटीलो मैदानको वरिपरी घेरावेरा गरेर विद्यालयको खेल मैदान पूर्वकै नामी वनाउने लक्ष्यमा समेत खनाल तल्लिन रहेको वताउँछन् । हालै खनालकै पहलमा पुर्व विद्यार्थी भेलाको समेत आयोजना गरेका छन् ।